Nei Sarudza Chunkai？
Nei tichifanira kupatsanura kutengesa kubva kufekitori? Kunyangwe ichi chisarudzo chakadzedzereka, kutanga kwedu ndechekuti kutarisira kuti vatengi vedu vanozowana masevhisi edu akanakisa munzvimbo ine kunzwa kuri nani.
Mhando dzeBiodegradable uye Inogadziriswazve Packaging Chinyorwa
Neraki pane zvakawanda zvinogadzirwa nehuori uye zvinogadziriswazve kuputira zvinhu zvimwe zviripo. Izvi zvinosanganisira: Mapepa uye makadhibhokisi - bepa nemakadhibhokisi zvinoshandiswazve, zvinogadziriswazve uye zvinogadziriswa zvigadzirwa. Kune akati wandei ezvakanakira kurudzi urwu rwekupakata chigadzirwa, kwete zvirinyore chokwadi chekuti ivo ...
Nei Sarudzo yeMagadzirirwo Ekupakata Mabhokisi Akakosha?
Hapana munhu anogona kuona zvinhu pakutanga kuona. Icho chimiro chekunze kana dhizaini inouya pamberi pemeso ako kutanga. Kana ichi chitarisiko kana dhizaini zvichikwezva vatengi, saka ivo vachatenga chigadzirwa zvirokwazvo, zvikasadaro, yako yemusika mugove kurasikirwa. Kana iko kwekutanga kuona kwechigadzirwa kurongedza mabhokisi kukatadza ...
Yakakwira Yemhando Pizza Bhokisi Mune Akasiyana Masayizi
Yepamusoro-Yemhando Corrugated Pizza Mabhokisi Isu tinogadzira yakafara mitsara yemarata emabhokisi epitsa masheya anouya akasiyana akasiyana saizi. Isuwo tinogadzira tsika dzakadhindwa pizza mabhokisi emaketani zvitoro kubva kune 4-50 zvitoro. Isu zvakare tine kugona kwekumhanya kudiki futi. Isu takagadzirwa kuraira nzvimbo uye ...